BBC Afaan Oromo – Local Insight
Paastar Adee Abrahaam poolisiitti kan himatame hordoftoota isaa tokkoon yoo ta’u, namni kun paastarichi balbala jannataa magaalaa Araromi-Ugbeshi keessa jirutti si geessa jechuun doolaara 750 yookaan Birrii 40,000tti siqu akka isa kaffalchiise himeera. click here to read original article...
Ji'oota jalqabaa bara 2022 keessa lakkofsi dureeyyii Raashiyaa Dubaay keessaa qabeenya bitatanii dhibbentaa 67'n dabale jedhe gabaasni. click here to read original article...
Qondaalonni Yukireen Raashiyaan karaa hundaa warshaa oomisha sibiilaa Azovistal irratti bante jechuun himan. Bakki kun Maariyuu Puul keessaa bakka dhumaa loltootni Yuukireen qabatanii jiranidha. click here to read original article...
Tishartiin lammiin Arjantiinaa Diyaagoo Maaraadoonaan Waancaa Addunyaa bara 1986 irratti uffatee Ingilizii irratti lakkoofsise gatii rikoordii ta'e paawundi miiliyoona 7.1'n gurgurame. click here to read original article...
Waancaa Chaampiyeens Liigii: Riyaal Maadiriid duubaa ka’ee Maanchistar Siitii injifachuun xumuraaf darbe
Maanchister Siitiin dorgommii Chaampiyeens Liigii murteessaa tahe irratti osoo hin eegamiin kufaatii guddaa keessa gale, Riyaal Maadirid duubaa ka'uun injifachuun xumuraaf Liiverpuul waliin taphachuuf darbe. click here to read original article...
Ahmadreza Djalali: Siwiidiin doktaricha du’aan adabuuf karoorfachuutti yaada’u himte
Dr Ahmadreza Djalali namni lammii biyya lamaa ta'e kun Iraaniitti baatii kana keessa du'aan adabamuuf akka jiruu dhagahame. click here to read original article...
Waraana Xaaliyaanii waliin: Seenaan baay’ee hin dubbatamneef Injifannoon Saambee maali?
Waraanni Saambee waraana cimaa Waxabajjii 27 hanga Adoolessa 04 bara 1933 guyyoota torbaaf adeemsifamedha. Iddoon inni itti adeemsifames godina Iluu Abbaa Booraa magaala Goree irraa kallattii Kibbaan kilomeetira 17 fagaattee kan argamtufii magaalaa xiqqoo kan turte Saambee irrattidha. click here to read original article...
Ansoolaa siree keenyaa yeroo hagam hangamitti geeddaruu qabna?
Namootni tokko tokko matadureen kun bakkeetti waan haasa’amuu qabu miti jedhanii yaaduu malu, garuu kun wanta hunda keenya miidhuu maludha: Ansoolaa siree keenyaa yeroo ammamiitti geeddaruu fi miiccuu qabnaa? click here to read original article...
Maanchistar Siitiifi Riyaal Maadriid keessaa eenyu xumura Chaampiyoonsi Liigiif darba?
May 4, 2022 BBC Afaan Oromoo
Xumura shaampiyoonsi Liigii Awurooppaaf darbuuf tapha marsaa lammeessoon Maanchistar Siitiin dirree ispeenitti Riyaal Maadriid waliin falmata.Waayee tapha har'aa kana maaltu jedhame? click here to read original article...
Masriitti gumaachi kaardii bilbilaa saantima 0.50, doolaara miiliyoona 1 argamsiise
Duulli gumaachaa kun kan eegale Dilbata baatiin Ramadaan xumuramuu isaa sa’aatii muraasa durseeti. click here to read original article...